နည်းပညာသုတေသနဌာန(မြိုင်)၏အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ - Department of Technology Promotion and Coordination (DTPC)
Technological Research Department (TRD) was closely collaborating with other departments of Ministry of Science and Technology. The department produced the following research products of Materials Science and Materials Engineering Research Department (MSMERD) and Technical Research Department (Pyin Oo Lwin) and Central Shop (Kyauk Se).
• Aluminum and Copper electrodes
• Blower blades
• Automobile engine head and blocks
• Locomotive engine head production
• Single type engine head and blocks
• Machine parts and equipments
Current activities (Research and development)
The department is now carrying out one research product and two experimental-based researches.
1. Portable line boring machine
2. Electrode-wear analysis on various type of material and depth of cavity by EDM Die-sinking process
3. Experimental research on dimensional accuracy of parts performed by EDM Die-sinking process
Current activities (Human resource development)
The department opened interdepartmental training courses for various CNC machines to promote the skill of employees. The courses opened in 2015-2016 fiscal year are:
1. Basic and advanced training for Coordinate Measuring Machine
2. Basic and advanced training for Milling Machine
3. Basic and advanced training for EDM Die-sinking Machine
4. Basic and advanced training for CAD
5. Basic and advanced training for CAM
6. High speed machining
နည်းပညာသုတေသနဌာန(မြိုင်)သည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အခြားသုတေသန ဌာနများနှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဌာနအနေဖြင့် ဒြပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့်ဒြပ် ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာသုတေသနဌာန၊ နည်းပညာသုတေသနဌာန(ပြင်ဦးလွင်)နှင့် ဗဟိုအလုပ်ရုံ (ကျောက်ဆည်)တို့မှ ဆောင်ရွက်သည့် အောက်ဖော်ပြပါ သုတေသနစမ်းသပ်ပစ္စည်းများအား ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
Aluminum and Copper electrodes များထုတ်လုပ်ခြင်း
Blower blades များထုတ်လုပ်ခြင်း
Automobile engine head and blocks များထုတ်လုပ်ခြင်း
Locomotive engine head production များထုတ်လုပ်ခြင်း
Single type engine head and blocks များထုတ်လုပ်ခြင်း
Machine parts and equipments များထုတ်လုပ်ခြင်း
နည်းပညာသုတေသနဌာန(မြိုင်)သည် အောက်ဖော်ပြပါ သုတေသနစမ်းသပ်ပစ္စည်းတစ်ခု ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များပေါ်အခြေခံသည့် သုတေသနဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း နှစ်ခုတို့အား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Electrode-wear analysis on various type of material and depth of cavity by EDM Die-sinking process
Experimental research on dimensional accuracy of parts performed by EDM Die-sinking process
နည်းပညာသုတေသနဌာန(မြိုင်)အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏အရည်အသွေးများတိုးတက်စေရန် အတွက် ကွန်ပျူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်သည့် စက်များမောင်းနှင်သည့် ဌာနတွင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်သင်တန်းများမှာ
Basic and advanced training for Coordinate Measuring Machine
Basic and advanced training for Milling Machine
Basic and advanced training for EDM Die-sinking Machine
Basic and advanced training for CAD
Basic and advanced training for CAM
Total Hits : 63166